“မအမ်းစကောင်း……….အမ်းစကောင်း “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » “မအမ်းစကောင်း……….အမ်းစကောင်း “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on May 25, 2011 in Drama, Essays.. | 29 comments
အလုပ်ပိတ်တဲ့တစ်ရက် နေပူတော့ အပြင်လဲမထွက်ချင် မီးပျက်တော့ ရုပ်ရှင်လဲကြည့်မရ
ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ အိမ်က ဘီရိုကို ရှင်းဘို့ အတွေးရလာတာနဲ့ ချက်ခြင်းအကောင်အထည်ဖော်ပါတော့တယ်။
ဘီရိုထဲက ပစ္စည်းတွေအပြင်ထုတ်အောက်ခံစက္ကူတွေ အသစ်ပြန်ခင်း ပရုပ်လုံးတွေထပ်ထည့် ၊
မ၀တ်တော့တဲ့ အကျီင်္တွေ အပြင်ထုတ်လို့ အလုပ်မဟုတ်တာကို အလုပ်လိုသဘောထားလုပ်လိုက်တာ
အပြင်ထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဘီရိုထဲ အကုန်ပြန်ထည့်ပြီးတော့ မှ နာရီကို ပြန်ကြည့်မိတဲ့အခါ
ဘာများအပြင်မှာကျန်သေးလဲ လို့ ပြန်ကြည့်မိတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်း နို့မူန့်ပုံးတစ်ပုံးကျန်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
မပါဆို အတော်လေး လေးနေလို့ပါ။
အဲဒီပုံးနားကို သွားပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အကြွေစေ့တွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီဘူးကို ဖင်ကမတဲ့ပြီး ဖျာပေါ်သွန်ချလိုက်တော့ မကြားရတာ ကြာနေပြီးဖြစ်တဲ့ အနုတ်သံတချွမ်ချွမ်ကြားရပါတော့ တယ်။
ဖျာပေါ်မှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ အနုတ်တွေကို ကြည့်လိုက်တော့………………..
ဟိုအရင်ခပ်ငယ်ငယ်က သုံးခဲ့တဲ့ အတွန့်အတွန့်လေးတွေအများကြီးပါတဲ့ “ငါးပြားစေ့”၊
လေးဒေါင့် စပ်စပ် “ ဆယ်ပြားစေ့“ ဒေါင့်လေးတွေနဲ့လှပစွာရှိနေတဲ့ “မတ်စေ့ “(25ပြား)
၀ိုင်းဝိုင်းစက်စက်ပုံသဏ္ဍန်ရှိပြီး အရွယ်အစားနဲ့အလေးချိန်သာကွာသွားတဲ့ ငါးမူးစေ့နဲ့
1966ခုနှစ်ကမှထုတ်ထားတဲ့ ဒါန်ရောင် အပေ့ါစေ့လေးတွေရယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာမှထုတ်တဲ့ရွှေရောင်
အရင်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ အကြွေစေ့လေးတွေကတော့ခဲရောင် ဒါန်ရောင်မပျက်ပေမယ့်
ဒီအကြွေစေ့လေးတွေမြင်ပြန်တော့ ကိုယ်ငယ်ငယ်က အကြွေခေါ်ခေါ်အနုတ်ခေါ်ခေါ်
မရှိမဖြစ် ပိုက်ဆံအသေးလေးတွေ အကြောင်းကို ပြန်တွေးမိပါတော့တယ်။
ကျွန်တော် ဆယ်တန်းဖြေပြီးလို့ အောင်စာရင်းစောင့်နေတုန်းမှာ အိမ်မှာအလကား နေမယ့်အတူတူဆိုပြီး
ကျွန်တော့် အဘွားမိတ်ဆွေရဲ့ဈေးချိုထဲက ဆိုင်မှာ ဆိုင်အကူသွားလုပ်ခိုင်းပါတယ်။
ဆိုင်အကူဆိုတာ ဈေးဝယ်လာတဲ့ ဧည့်သည်ကြိုပေးရတယ် နောက် သူတို့ ၀ယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို
ညနေဆိုင်သိမ်းပြီဆိုရင် ဆိုင်ရှင်ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားပြီး တစ်နေကုန်ရောင်းထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို စီပေးရတယ်။အဲဒီခေတ်က ပိုက်ဆံမှာ 20ကျပ်တန်ဆိုတာ အကြီးဆုံး တစ်ဆယ်တန်၊ငါးကျပ်တန်
အိမ်ရောက်တာနဲ့ ထန်းခေါက်ဖာထဲ ငွေစက္ကူတွေကိုတော့ ဆိုင်ရှင် သမီး မမကြီးတို့စီပြီး ထန်းခေါက်တောင်းထဲကအနုတ်တွေကိုတော့ ကျွန်တော်က စီရပါတယ်။
စစခြင်း တစ်ပြား ငါးပြား ဆယ်ပြား တစ်မတ် ငါးမူးနဲ့ကျပ်စေ့တွေကို အမျိုးအစားတွေခွဲ ရင်း ဆယ်ခုစီ ရေပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာချထား၊
နောက်တော့ မှ အမျုိးအစားတူတာတွေကို ခုရေ(100)စီပြန်ပုံ ၊
ပုံ ပြီးရင် စက္ကူနဲ့အတောင့်လေးဖြစ်အောင်ပတ်ပြီးလိပ်၊
နောက်နေ့ကျတော့ ဒီအလိပ်ကလေးတွေကို ထန်းခေါက်ဖာထဲပြန်ထည့်လို့ ဈေးကိုပြန်ယူသွားပြီး ဈေးဝယ်တွေကို အနုတ်အဖြစ် ပြန်အမ်းပါတော့တယ်။
နောက်ဈေးဝယ်တွေကလဲ ဈေးပြန်လာဝယ်ရင် ဒီပိုက်ဆံအလိပ်ကလေးတွေဘဲပြန်ယူလာကြတယ်ဆိုတေ့ာ၊
ဒီပိုက်ဆံလိပ်ကလေးတွေက လွန်းပျံသလို ဆိုင်ပြန်ရောက်လိုက် ပြန်ပါသွားလိုက်နဲ့သံသရာလည်ပါတော့တယ်။
အဲဒီတုန်းကများဈေးဝယ်က ကျွန်တော်တို့ကို အဲလို အကြွေလိပ်ကလေးတွေပေးရင် သိပ်သဘောကျတာလေ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုက်ဆံ တစ်စေ့ခြင်း ရေ စရာမလိုတော့လို့ပါ။
ငါးမူးလိပ်ဆိုရင် ကျပ်ငါးဆယ် ကွက်တိဘဲ။
ဒါပေမယ့် ဈေးဝယ်ကို အဲလိုအကြွေလိပ်ပြန်အမ်းရင်တော့ သူတို့က မယူချင်ကြပါဘူး။
အဲဒါကတော့ ငါးပြား ဆယ်ပြားသုံးခဲ့ရတဲ့ အချိန်ပေါ့။
အကြွေတို့ အနုတ်တို့ပေးရင် စိတ်ဆိုးတယ်လေ။
နောက်ခေတ်တွေပြောင်းလာတော့ ငါးပြားဆယ်ပြားသုံးရတဲ့ခေတ်ကိုကျော်လွန်လို့ ကျပ်ခေတ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါရော။
လက်ဖက်ရည်တစ်ကျပ် ပလာတာတစ်ကျပ် ဆိုတဲ့ခေတ်ပေ့ါ။
အဲဒီခေတ်မှာတော့ အကြွေပြဿနာ အနုပ်ပြဿနာ တစ်ပါတ်လည်လာပြန်ပါတယ်။
လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်သောက်ပြီး ငါးကျပ်ပေးရင် အမ်းစရာကျပ်တန်လေးရွက်မရှိပြန်တော့လဲ
“အနုတ်လာ လဲတာလား ?”ဆိုတော့မေးခွန်းနဲ့ဘုတောခံရတတ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေအဲဒီငါးထောင်တန်အုပ်တွေက ကိုယ်က သူများပေး သူများကနောက်တစ်ယောက်ပေး၊
အဲဒီလူက ကိုယ့်ပြန်ပေးနဲ့ ဒီပိုက်ဆံထုပ်ကို ဖြည်မသုံးဘဲဟိုအိမ်ရောက် ဒီအိမ်ရောက်နဲ့ ရွာတွေလည်နေတတ်ပါတယ်။
အဲလိုပိုက်ဆံအရွက်သေးတွေပေါတဲ့ခေတ်က အနုတ်စီးဖြစ်တဲ့ငါးထောင်စီးပေးရင် သယ်ရတာလေးလို့ဆို
ပြီး စိတ်ဆိုးတတ်ပါတယ်။တတ်နိုင်သလောက်အဲဒီအနုတ်တွေကို မယူချင်ကြပါဘူး။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ လေးဆယ်ငါးကျပ်တန်တွေ ငါးဆယ်တန်တွေ ကိုးဆယ်တန်တွေကလဲပေါမှပေါ။
လေးဆယ့်ငါးတို့ ငါးဆယ်တို့ကိုးဆယ်တန် တစ်ရာတန်ဆိုရင်ငါးထောင်စီး ၊နှစ်ရာတန်ဆိုရင်တော့ အရွက်တစ်ရာတစ်အုပ်ကို နှစ်သောင်း ဆိုတော့ ငါးအုပ်ကို တစ်သိန်းစီး စီးကြပါတော့တယ်။
အရင်တုံးကတော့ ဒီလိုငါးဆယ်တန်တို့ လေးဆယ့်ငါးကျပ်တန်တို့ တစ်ရာတန်တို့ နှစ်ရာတန်တို့ကို
လေးတာရယ် ၀န်ပွတာရယ်ကြောင့် တတ်နိုင်သလောက်မယူဘဲ ငြင်းပါတယ်။
အဲဒီတုံးကလဲ ဒီလိုအနုတ်စီးတွေက ဘယ်သူမှ ဖြည်မသုံးဘဲတစ်လက်ကနေတစ်လက်ပြောင်းနေတတ်ပြန်တော့
ဒါပေမယ့်လဲ ဘယ်လောက်စုတ်စုတ် ဘယ်လောက်ညစ်ပတ်ညစ်ပတ် ပိုက်ဆံဆိုတဲ့အသိနဲ့လက်ခံကြရတာပါဘဲ။
2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီ အနုတ်စီးတွေက ဘယ်ကိုရောက်လို့ ဘယ်မှာများသွားပုန်းနေတယ်မသိ
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ငွေပေးငွေယူလုပ်ရင်လဲ ငါးရာတန် တစ်ထောင်တန်ဆိုတဲ့အရွက်ကြီးတွေနဲ့ဘဲ
နောက်တော့ ဒီအဟောင်းအစုတ်ကို လိုချင်လို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။
အရင်က မလိုချင်လို့ ငြင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့ 100တန် 200တန်တွေကို ပါရင်လဲပေးခဲ့စမ်းပါလို့တောင်
အနုတ်ရှားပါးစအချိန်တုံးကတော့ ပိုက်ဆံအစုတ်ကို အမ်းရင် ဘယ်သူမှ မယူဘဲငြင်းပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ နဲနဲစုတ်စုတ် များများ စုတ်စုတ်ယူရပါတော့တယ်။
မယူရင်လဲ မရယုံဘဲ ရှိတာကိုး။
အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ပိုက်ဆံတွေက အဖာရာဗလပွနဲ့ကိုင်မရတော့လို့ပိုက်ဆံကို ပလပ်စတစ်အိပ်လေးထဲ
အနုတ်ရှားတော့ ရောင်းကြ၀ယ်ကြတဲ့နေရာမှာ အထူးသဖြင့်လက်လီသမားများမှာအခက်တွေ့ပါတော့တယ်။
ကားစပယ်ယာ၊အကြော်သည်၊ပဲပြုတ်သယ်၊လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အ စရှိတဲ့အခြေခံလူတန်းစားများနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရောင်းဝယ်နေရတဲ့သူတွေရဲ့ဒုက္ခကလဲ မသေးပါဘူး။
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းထက်ပိုပြီးမလိုတာတွေ ၀ယ်ဘို့ဆိုပြန်တော့လဲ ဈေးလာဝယ်တဲ့သူက ပိုက်ဆံအပိုမသုံးနိုင်။
လာဝယ်တဲ့သူကလဲ ပိုက်ဆံတွက်သုံးရတဲ့သူဆိုပြန်ရင် အနုတ်ကို ချန်မထားခဲ့နိုင်ပြန်သလို၊
ဈေးသယ်ဘက်ကလဲတစ်ယောက်ကိုတစ်ရာချန်ထားမယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဆယ်ယောက်ဆိုတစ်ထောင် ဆိုတော့အရင်းလျော့ သွားပြန်ရော။
ပိုက်ဆံကို တစ်ရာစ နှစ်ရာစချန်ထားပြန်တော့လဲ ဈေးဝယ်က နောက်တစ်ခါလာဝယ်ရင်အမေ့ခံပြီးပြန်မပေးတာရှိသလို အရင်ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံကို မပေးချင်တော့ ဆိုင်ပြောင်းလို့ဝယ်ပါတယ်။
အဲလိုလဲ အခက်အခဲကြုံရော ဈေးသည်တွေက လာဝယ်တဲ့သူကို ငါးဆယ်တစ်ရာအစား
မသိသူကိုဆိုရင်လေးဆယ့်ငါးကျပ်တန် တစ်သျူးထုပ်ကို တစ်ရာဆိုပြီးခပ်တည်တည်အုပ်ပါတယ်။
ကြာတော့ ဈေးဝယ်က မခံနိုင်တော့ ပစ္စည်းအမ်းရင် မယူဘူးဆိုပြီးလုပ်ပါတော့တယ်။
အဲဒီတော့မှ နောက်တစ်ခါဒါနဲ့ပြန်ဝယ်ပါဆိုပြီး လိုက်လျှောပါတယ်။
အဲလိုလဲ လိုက်လျောရောတစ်ချို့သော ဈေးဝယ်လူလည်များက လဲ ချိုချဉ်အထုပ်လိုက်ဝယ်ထား၊တစ်သျှူးအထုပ်လိုက်ဝယ်ထားပြီး
ဈေးဝယ်တဲ့အခါပြန်ထည့်ဝယ်တော့သူ့ဆိုင်ကပေးလိုက်တာ မဟုတ်တော့ မရဘူးဆိုလဲဆိုင်ရှင်က ငြင်းရော စကားတွေများကုန်ပါတော့တယ်။
အဲတော့ ဈေးသည်တွေကလဲ အနုတ်ပြန်မအမ်းရတဲ့အောင်ဈေးတင်ဖွင့်ပါတော့တယ်။
ပစ္စည်းတစ်ခု လေးရာတန်ဆိုပါတော့ အနုတ်ပေးရင်လေးရာ ပါဘဲ။
မပါရင်တော့ ငါးရာ ၀ယ်ချင်ဝယ်မ၀ယ်ချင်နေပါဘဲ။
တစ်ချို့က ပိုက်ဆံအစားကူပွန်ကို သုံးခဲ့ကြပေမယ့်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတော့လဲသုံးလို့မရဘူးပေါ့။
အဲတော့လဲ ပိုက်ဆံအနုတ်မရှိတော့ ရှိတာအမ်းတာကိုယူချင်ရင်ယူ မယူချင်ရင်ကိုယ်ကြိုက်တာကို
အဲတော့လဲ ဈေးဝယ်ရတာ အတော်လေးကို အုံးစားပါတယ်။
ဒီအနုတ်ကိစ္စပြောရမယ်ဆိုရင် ဈေးဝယ်ပေါ်မှာ အမြတ်ထုတ်ချင်တဲ့ဈေးသည်ရှိသလို
ဈေးဝယ်ကို သူမလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမ်းရတာကို အားနာတဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ငွေကိုဘဲ
ဘဏ်တွေမှာ အစုတ်တွေရှိရင်လဲပေးတယ်ဆိုပေမယ့်လဲ များများလဲလောက်စရာ အနုတ်က
ပိုက်ဆံအသစ်လက်ထဲမှာရှိသူ လဲလို့ရသူက ဈေးတင်ပြီးပြန်ရောင်းကြပါတယ်။
အနုတ်ဝယ်ပြီးလဲပေးမယ်ဆိုရင်လဲ ဈေးသည်တွေအတွက်က အမြတ်မကျန်တော့အဆင်မပြေပါဘူး။
အခုခေတ်မှာ အပြိုင်အဆိုင်ဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ခေတ်တော့ အမြတ်ကလဲ ပါးပါးလေးဆိုတော့ အပိုထပ်အကုန်မခံနိုင်ပါဘူး။
အရင်တုံး က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လက်လွှဲပေးနေကြတဲ့
ငါးဆယ်တန် လေးဆယ့်ငါးကျပ်တန်ကိုးဆယ်တန် တစ်ရာတန် နှစ်ရာတန်တွေဘယ်များရောက်ကုန်သလဲ
ဆိုတာကို တွေးမိတော့ အဖြေမရဘဲခေါင်းသာချာချာလည်သွားပါတယ်။
ဘဏ်တွေက နေပြီး နှစ်ရာတန် အသေးလေးတွေထုတ်တာတွေ့လိုက်ရပေမယ့် တကယ်လိုအပ်ချက်ကိုပြည့်မီအောင်တော့မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဘဲယူဆပါတယ်။
ကျွန်တော်အလုပ်ထဲက ကလေးများက ကော်ဖီသောက်ချင်ရင်ကျွန်တော်ဆီလာတောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကပြန်လာရင် ကော်ဖီမစ်ထုပ် ဒါမှမဟုတ် တစ်သျှုးထုပ်ကပါလာစမြဲပါ။
လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် 250 ပြန်အမ်းရင် တစ်သျူးတစ်ထုပ်နဲ့ နှစ်ရာတန်အစုတ်တစ်ရွက်။
ဆိုင်ကတော့ “လေးလေး ဒါတွေပြန်ယူလာခဲ့နော်” လို့ပြောပေမယ့်လည်းလက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကို
အဲတော့ ရုံးက ကလေးတွေနေ့လည်ကော်ဖီသောက်ချင်ရင်အံဆွဲထဲ ဖွင့်ယူသွားကြတာများပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ကော်ဖီမကြိုက်ဘူးလေ အဲတော့ ကြိုက်တဲ့သူယူသောက်ပေါ့။
အဲတော့ ဒီအနုတ်အမ်းရတဲ့ကိစ္စက ဒုက္ခတစ်ခုလို့တော့ ပြောလို့မရပေးမယ့် နေ့စဉ်စိတ်အနှောင့်အယှက်
ဒီအနုတ်တွေအစား ပစ္စည်းတွေအမ်းနေရတာကို ဆိုင်တွေကလဲ မအမ်းချင်သလို ကျွန်တော်တို့ကလဲမယူချင်ပါဘူး။
မအမ်းချင်ပေမယ့်လည်း လက်တွေ့မှာအမ်းနေရတာကလဲ အမှန်ပါဘဲ။
စုတ်ပြတ်သတ်နေ ညစ်ပတ်ပေပွနေတဲ့ မသတီစရာ ပိုက်ဆံတွေကိုလဲ ကျွန်တော်အပါအ၀င်
ဒါပေမယ့်လဲအဲဒီလောက်ငွေကြေးပမဏာကို အဆုံးရှုံးမခံနိုင်တော့ ရွံရှာစက်ဆုပ်ပေမယ့်လည်းကိုင်ရတာပါဘဲ၊
(သမ္မာအာဇီဝနဲ့ငွေရှာသူအဖို့ တော့ တစ်ရာကျပ်ကလဲ တစ်ရာ နှစ်ရာကျပ်ကလဲ နှစ်ရာ လွန်စွာအဖိုးတန်ပါတယ်)
အဲတော့ ခေတ်နဲ့အညီ မိုးနတ်မင်းကြီးကိုဘဲတိုင်တည်ရပါတော့မယ်။
ရွှေမိုးငွေမိုး တွေမရွာပါနဲ့တော့ မြန်မာပြည်အတွက် ငါးဆယ်တန်အသစ် တစ်ရာတန်အသစ်
နှစ်ရာတန်အသစ်တွေကိုသာ မိုးအဖြစ်ရွာချပေးလိုက်ပါတော့လို့ တိုင်တည်လိုက်ပါတယ်နော်။
အိုဗျ၊ အန်ကယ်ကြီးရဲ့ လင်းစမ်းပါဦးလို့။။။။။။။။။။။။။။။
မအမ်းလည်း ခက် အမ်းလည်းခက်လို့ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ ကိုယ်ရောင်းတဲ့အခါ အစားထိုးပစ္စည်းတွေအမ်းရတာ အမျိုးမျိုးတုန့်ပြန်မှုတွေ ခံရတယ်။ မအမ်းရင်လည်း မဖြစ်။ အမ်းစရာလည်း မရှိဆိုတော့။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ချင်းစာတဲ့အနေနဲ့ ကိုယ်ပစ္စည်း ဝယ်တဲ့အခါ အစားထိုးပစ္စည်း အမ်းတာကို မငြိုငြင်ပဲ လက်ခံပေးလိုက်တယ်။ လူတိုင်းဖြစ်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေပဲ။
အခုခေတ် ကလေးတွေဆိုရင် ပိုက်ဆံ အကြွေစေ့တောင် မမြင်ဘူးကြတော့ဘူး.. သိတောင်သိပမလားမသိ…
ကလေးတွေကို အကြွေစေ့ ပြချင်ရင် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးက ရှေးဟောင်းပစ္စည်းရောင်းတဲ့နေရာ ခေါ်သွားပြရမလိုဖြစ်နေပြီ…
ပြီးတော့ ရေဆိုခံ အနုတ်တွေကလဲ ပေါမှပေါ (တိတ်အပြည့်ကပ်)….. ပြန်လဲခိုင်းလဲ ဒီထက်စုတ်တာပဲရှိတယ်…
ဒီ စာမျက်နှာကို လည်း နိုင်ငံက တာဝန်ရှိသူတွေ ကို ကြည့်စေချင်တယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင်တော့ ပိုက်ဆံ တွေကို ၂၀၀ တန် ဒါမှမဟုတ် ၁၀၀ တန်လောက်အထိ အကြွေစေ့တွေ ထုတ်ပေးစေချင်တယ်။ စက္ကူပေါ်ရိုက်ထုတ်တာက အကြွေစေ့ထက် ကုန်ကျစားရိတ် ပိုများတယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ ပိုက်ဆံတွေက အသုံးများ လည်ပတ်မှုများတဲ့ ပိုက်ဆံတွေလေ။ ဒီတော့ စက္ကူနဲ့ဆိုတော့ ပိုမြန်မြန်ပျက်ဆီးလွယ်တာပေါ့ဗျာ။ အကြွေစေ့ဆိုတော့ ကြာကြာခံတာပေါ့။ ဒီတော့ ပျက်ဆီးလို့ ပြန်ရိုက်ထုတ်ရတာ အကြိမ်ရေ များလာရင် ကုန်ကျစားရိတ်က အကြွေထက်ပိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အကြွေကို ထုတ်သင့်ပါတယ်။ ပိုပြီးကုန်ကျစားရိတ်သက်သာအောင် ဂျပန် ၅ ယန်းတန် အကြွေစေ့တွေလို အလည်ခေါင်က အပေါက်ဖောက်လိုက်ပါလား တာဝန်ရှိသူများ။ အကြွေတွေ များလာရင် ပိုပြီး သတ္တုတွေပိုလာပြီး ပို ရိုက်လို့ရတာပေါ့။ အလယ်က အပေါက်နဲ့ဆိုတော့ သယ်ရလဲလွယ်မယ်ထင်တယ် ကြိုးနဲ့ သီပြီးလေ။ အစိုးရဆိုတာ လူထုသက်သာချောင်ချိအောင် ၀န်ဆောင်မှုပေးရတာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာ လူထုကို စီးပွားရေးလုပ်နေသလိုမျိုး ရှုံးတယ်မြတ်တယ် တွက်နေရမှာ မဟုတ်ဘူး။
နောက်တခုက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ပိုက်ဆံကိုင်တာ စည်းကမ်းမရှိကျဘူး။ ထိုးချေချင်သလို ထိုးချေ၊ ရေးချင်ရာရေး ခေါက်ချင်သလိုခေါက်၊ သုတ်ချင်ရာသုတ်။ ဒါနဲ့ ညစ်ပတ်ပြီး မြန်မြန်ပျက်ဆီးရော။ နောက်တခုက အစိုးရက အကြွေစေ့ ထုတ်ပေးရင် မသုံးချင်ကျဘူး။ လက်မခံချင်သလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ အဲဒီ အကျင့်ဆိုးတွေ ဖျောက်ရမယ်။ နောက်ကြားဘူးတာတခုရှိတယ်။ အကြွေတွေ ၀ယ်ပြီး အရည်ကြိုပစ်တယ်တဲ့ ဒါမလုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပဲ။ နိုင်ငံအနေနဲ့ သုံးစွဲနေသော ငွေကြေး ငွေစက္ကူ ဒင်္ဂါး အကြွေစေ့ ဖျက်ဆီးမှု ဥပဒေကို ကြီးလေးတဲ့ အပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့ တကွ သေသေချာချာ ချမှတ် ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဖို့လိုမယ်။ ဥပမာ အနှစ် ၁၀နှစ် မှ ၃၀ နှစ်အထိထောင်ဒဏ် နှင့်တကွပိုင်ဆိုင်မှုပါသိမ်း။ ဒါမျိုးလုပ်ဖို့လိုတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တော်ရုံတန်ရုံပြစ်ဒဏ်လောက်နဲ့ မမှုဘူး။ ပြစ်ဒဏ်ကြီးရင် လိုက်နာကျတယ်။ မယုံရင် မီးရထား သံလမ်းကိစ္စကြည့် ဘယ်သံဝယ်တဲ့သူမှ ရထားသံလမ်း ၁ လက်မ၊ လက်မ၀က်တောင် မ၀ယ်ရဲဘူး။ မယုံရင် သံတိုသံစ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာ ဖြတ်ထားတဲ့ သံလမ်းလေး ၁လက်မလောက်သွားချကြည့်၊ ဘီလူးကိုယ်ထင်ပြသလို ကြောက်နေလိမ့်မယ်။ သံလမ်းဝယ်မလားပဲ မေးရုံနဲ့တင် ကြောက်လှပါချီရဲ့ အော်နေမှာ။ ဒါကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ကြီးကြီးလိုတယ်။
မှန်လိုက်တာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ပြစ်ဒဏ်တွေကို ပြင်သင့်ပြီ။ ဥပမာ ကလေးတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့ မုဒိမ်းမှုတို့ဆိုရင် သေဒဏ်လောက်ချသင့်တယ်။ ဒါပေမဲ့ (၃)နှစ်လောက်ပဲ ချတယ်။ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ဘ၀ တသက်လုံးအမဲစက်အတွက် သူတို့ရဲ့အသက်ကိုပေးသင့်တယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ စတီးချိုင့်လေးခိုးတာကို ထောင်ဒဏ်(၇)နှစ်ချတယ်။ လူသတ်မှုကို ထောင်(၃)နှစ်ချတယ်။ကြားလို့ကောင်းကြရဲ့လားလို့သာ မေးလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။ခုခေတ်မှာ တရားကိုနတ်မစောင့်တော့ဘူး။တရားကို ……………. ဘယ်သူစောင့်နေလဲ
ဆောရီးပါ ကိုပေါက် ……
အိမ်မှာ ဆူး စုထားတဲ့ အကြွေ တဗူး ရှိတယ်။
ကော်ဖီမစ်တုတ် ဆိုတာလည်း အထုတ်ကြီးနဲ့ ၀ယ်သောက်ရင် ဈေးကြီးတဲ့ အထုတ်မှ ၆၀ လောက် ကျတာ.. တောယုံဆို ၄၀ ၄၅… ၁၀၀ နဲ့ အမ်းတော့ ကိုက်တယ်။
တစ်ရှူးဆိုတာလည်း တခါတလေ ၅၀ နဲ့ ရောင်းတာ တွေ့ပေမဲ့ ၁၀၀ နဲ့ အမ်းကြတယ်။
အကြွေတွေ အစိုးရ ဘဏ်တွေက ထုတ်ပေးတယ် ပြောသံကြားနေတယ် တခါတလေ အသစ်လေးတွေ ရရလာတယ်။ တွင်ကျယ်လာရင်တော့ အဟောင်းပျောက်သွားမယ် ထင်တယ်။
ဆူးရေ ဘာအကြွေတွေလဲ။ ၂ထပ်စေ့ တွေပါလား။
၂ထပ် အစေ့ ဆိုရင် ကျပ်စေ့ ရှိတယ်။
ရောင်းဘူး။ မြေးတွေ ပြဖို့ အမှတ်တရ သိမ်းထားတာ..
ကျနော်ကတော့ မဆလခေတ်မှာ အသိမ်းခံရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့မြန်မာ့စောင်းပုံ ပါတဲ့ရာတန် အစိမ်းရောင်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ အလျားတူပေမဲ့ ဗျက်ကြီးလို့ မြင်ရတာ အားရှိတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ဘိန်းဖြူအရောင်းအဝယ်လုပ်လို့ ငွေအထုတ်လိုက် သေတ္တာထဲထည့်ပြရင် အားရှိစရာကြီး။ တကယ်သုံးရသူတွေကတော့ သိမ်းရတာခက်လို့ သိပ်ကြိုက်မယ်မထင်ဘူး။ အသိမ်းခံရတဲ့ ၂၅ကျပ်တန် အနီရောင် ငွေစက္ကူလည်း ဒီလိုပဲ ဗျက်အကြီးမိုလို့ မြင်ရတာအားရှိတယ်။ ကျနော့်မှာရှိတဲ့ ဒေါင်းတံဆိပ် ဒင်္ဂါးပြားကို တခုဆယ်သိန်းပေးရင် ရောင်းမယ်၊ ဝယ်မဲ့သူရှိလားဗျို့….
ဆြာကြောင် အကြွေက အင်လား အစစ်လားစစ်ရဦးမယ်။
ကိုကြောင်ကြီးက ဒင်္ဂါးကို ဆယ်သိန်း ဆိုတော့ နည်းမနေဘူးလား .. အခုခေတ် တွေ့ဖူးသူ မရှိသလောက်ပါ .. အတုတော့ မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ..
One Kyat silver Burmese Peacock coin, 1852
Time left:	3d 12h (May 29, 201113:22:11 PDT)
Starting bid:	GBP 12.00
Approximately US $19.52
၁၈၅၂ ဒေါင်းဒင်္ဂါးဆိုရင်တော့ … ဒေါ်လာ၂၀ တန်တယ်..။ အရင်က.. ၅ဒေါ်လာအောက်မှာပဲရှိတာ..။
pirate of the caribbean မှာ.. ဂျက်စပဲရိုးခေါင်းက အဆောင်က.. မြန်မာ ၅ပြားစေ့..။ အဲဒါက.. အဲဒီရုပ်ရှင်အပြီးမှာ တန်ဖိုးတော်တော်တက်သွားဖူးတယ်..။
ကိုပေါက်စာမူနဲ့ မဆိုင်ပဲ.. ဗဟုသုတ ၀င်ပြောတာပါနော..။
ဘာပဲပြောပြာ ကျေးဇူးပါ သူကြီးရေ။
သဂျီးပြတဲ့ ခြင်္သေ့ထိုင်နေတဲ့ အကြွေစေ့ ဆူးမှာ ရှိတယ်။
(ဆောရီးပါ ကိုပေါက် ……
ဟဲဟဲ စကားမစပ် စတော်ဘယ်ရီသီး ဖြစ်သွားပြီ။ ဦးပေါက်ရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေလည်း ကြားချင်ပါတယ်။
မမလေးတို့ပြောတဲ့ ပြစ်မူ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်ကို ဘဲဆက်ပြောချင်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ် မြန်မာပြည်မှာ တစ်ချို့သောအမူ့တွေက ပြစ်မူ့ကျူးလွန်လိုက်တာနဲ့ ခံရတဲ့ပြစ်ဒဏ်
ဒါပေမယ့်  ပြစ်ဒဏ်ပေးတာ များရင်လဲ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ လူတွေက ၀ိုင်းအော်ကြအုံးမယ်။
မှတ်လောက်သားလောက်တဲ့ အပြစ်တော့ ပေးသင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
တစ်ခါတ်တစ်လေ ခပ်စပ်စပ်လေးတီးပေးမှ မှတ်မှာလေ ဟုတ်တယ်မလား
အဲဒီလူ့အခွင့်အရေးအော်နေသူများကို ပြောလိုက်ပါ။ ခံရတဲ့သူဘက်က လူ့အခွင့်အရေးက ဘယ်ဂျောင်မှာ သွားထိုးမလဲ။ နေဦး ဒီကိစ္စတွေ အိုဘယ့် အန်ဂျီအို အပိုင်းဆက်တွေမှာ ရေးဦးမယ် အခု ၂ပိုင်းပဲ တင်ရသေးတယ်။
ကိုပေါက် ရေးထားတာ တော်တော့်ကို ကောင်းပါတယ်။ ပိုက်ဆံအကြွေ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခေတ်ဟောင်း ခေတ်သစ် အတွေ့ အကြုံ တွေလည်းပါတယ်။ လူတိုင်းကြုံနေ ရတဲ့ ပြသနာ တွေကော သေချာ မြင်အောင်ရေးထားတယ်။ ဂျာနယ်တွေ တောင် ဒါမျိုး ရေးတာ မဖတ်ဖူးသေးဘူး။ သေချာမွန်းမံပြီး ဂျာနယ် ထဲထည့် လိုက်ရင် ကောင်းမယ်ဗျ။
ပိုက်ဆံအကြွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကတော့ ကိုပေါက် ရေးထားသလိုပဲ ၀ယ်သူ ကော ရောင်းသူ မှာကော ဒုက္ခ ကိုယ်စီနဲ့ ။ ဖြေရှင်းဖို့ ကတော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရပဲတတ်နိုင်မှာပဲ။ လက်လီဆိုင်တွေမှာ ဈေးနှုန်း ပိုတင်ပြီးရောင်းနေ ကြရတာလဲ ဒီပြသနာကြောင့်လဲပါတယ်ထင်တာပဲ။
ပိုက်ဆံအကြွေတွေကို ပြည်သူတွေ လိုသလောက် ထုတ်ပေးနိုင်မှပဲ ပြေလည်မှာပါ။ ငွေအကြွေ နဲ့ လုပ်စားတဲ့သူ တွေကို ဖမ်းရုံနဲ့ တော့မထူးပါဘူး။ ဗဟိုဘဏ်က လည်း ဒီဘက်သိပ်အာရုံမစိုက်နိုင်သေး ဘူးထင်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထု အတွက် ဆိုတော့ သိပ်အရေးမကြီးဘူး ဆိုပါတော့။
ဟိုတနေ့က short course training တခုမှာ သင်တဲ့ ဆရာက ရယ်စရာလေးပြောသွားပါတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် တက္ကသိုလ်မှာ ပါမောက္ခဖြစ်နေတယ်တဲ့။ သူငယ်ချင်းအမေက သူ့သားကို အစားအသောက်တွေ သိပ်ကျွေးတာတဲ့၊ ဟိုးငယ်ငယ်တုန်းကတည်းက အစားအသောက်တွေကျွေးရင် သားရေ..စားနိုင်တုန်းစားထားနော်လို့ပြောပြီးကျွေးတယ်တဲ့။ နောက်ကြီးလာတော့လဲ အဲသလိုပဲ သားရေ .. စားနိုင်တုန်းစားထားနော်လို့ပြောတယ်တဲ့။ နောက်တက္ကသိုလ်တက်တော့ ဒီအတိုင်းပဲ စားနိုင်တုန်းစားထားနော်လို့ ပြောတယ်တဲ့။ အဲ ဘွဲ့တွေရ တက္ကသိုလ်မှာ ဆရာဝင်လုပ်၊ အခုပါမောက္ခဖြစ်တဲ့ အချိန်ထိလဲ ပြောနေတုန်းပဲတဲ့။ သားရေ…စားနိုင်တုန်းစားထားနော်တဲ့။ ကျွန်တော်လဲ ဆရာ့ရဲ့ အမူအရာနဲ့ အပြောကို သဘောကျလို့ ရီနေရင်း ကိုပေါက်ရဲ့ မစားစကောင်း စားစကောင်းလေးကို သတိရလိုက်မိ ပါတယ်။
တချို့သင်တန်းတွေမှာ ကို kai ရေးတဲ့ ကြယ်ငါးပုံပြင်လေးတွေကိုလဲ ကြားရတတ်ပါတယ်။ ကမ်းခြေကတော့ ချောင်းသာ ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
လွယ်အိတ်ထဲဘယ်ချိန်လာကြည့်ကြည့် ရာတန်အစုတ်တွေရှိတယ် လိုင်းကားအမြဲစီးနေရတာကိုးးးး ဈေးသယ်တွေကလဲ မုန့်လေးတစ်ခုကောက်ကိုင်လို့ အကြွေပေးစရာမရှိရင် လက်ထဲကနေပြန်ဆွဲယူသွားတာဗျာ…………….
ကာစတန်မာ ဖတ်စ် တွေဘာတွေလဲမရှိတော့ပါဘူး
ညီလေးပြောမှ ဟိုက သတိရသွားအုံးမယ်နော်